पुस्तक अंश: पृथक् पाइला, पृथक् अनुभूति - Kendrabindu Nepal Online News
पुस्तक अंश: पृथक् पाइला, पृथक् अनुभूति
२५ श्रावण २०७६, शनिबार १०:३३
आज पदयात्राको चौथो दिन ।
सँगै सुतेका केही साथीहरूको घुराइले म बिहान छ नबज्दै ब्युँझिसकेको थिएँ । घुर्नेहरूसँग सुत्नु पनि अभिशाप नै हुँदा रहेछ । कम पीडादायी थिएन मेरा लागि, उनीहरूको घुराइ ।
गत्लाङको जस्तै तातोपानीको कम्युनिटी हाउस पनि रूम प्रकोष्ठमा विभाजित थिएन । हामी लहरै सुतेका थियौँ । सहयात्री महिलाहरू त झनै सानो कोठामा खाँदिएर सुतेका थिए । पाँचजना थिए उनीहरू । उनीहरूको अप्ठ्यारोलाई म महसुस गर्न सक्थेँ । निद्राले त छाड्यो तर न्यानो ओछ्यान छाडिहाल्न मनले मानेन । अनिँदो भएरै ओछ्यानमा पल्टिरहेँ ।
यात्रा अझै निकै दिन बाँकी छ । सहयात्रीहरूको घुराइको शिकार भइरहनुपर्ने पो हो कि भन्ने कुरा मनमा खेल्दै थियो । त्यत्तिकैमा मेरो छेवैमा सुतेका विजय प्रधान ब्युँझे । मैले उनलाई खुसुक्क सोधेँ, “सुताइ कस्तो भयो त दाइ ?” उनले भने, “खासै राम्रो त होइन तर गत्लाङमा भन्दा चाहिँ राम्रै भयो ।”
पीडित थिए उनी पनि मजस्तै । हामी दुईबीचको संवादले होला, एकपछि अर्को गर्दै सबैको निद्रा खुल्दै गयो । उठेदेखि नै विजय प्रधानको ‘मुड फ्रेस’ भएको अनुभूति गर्न सकिन्थ्यो । विजय प्रधानको मुखारविन्दबाट ‘तारेमाम’ शब्द प्रस्फुटन भएपछि ओछ्यानबाटै
एकअर्कासँग अभिवादन साटासाट भयो ।
घुर्नेहरूलाई सोधेँ, “तपाईंहरूको सुताइ कस्तो भयो त ?” उनीहरूले भने, “एकदम राम्रो भयो ।”
‘राम्रो किन नहोस् त घुरीघुरी सुतेपछि ।’ विजय प्रधान भुत्भुताउँदै थिए । आफ्नो घुराइले अरूलाई बाधा पारेको थियो भन्ने कत्ति पनि महसुस हुन्थेन उनीहरूलाई । साढे छ बजे डाँडाबाट पिल्पिलाएको घामको झुल्को कम्युनिटी हाउसको झ्यालबाट लुसुक्क भित्र छिरेपछि हामीले ओछ्यान छाड्यौँ । शौचालयको व्यवस्था राम्रो नभएकाले हामी एकपछि अर्को गर्दै बस्तीसँगैको जङ्गलतर्फ लाग्यौँ र पेट सफा ग¥यौँ । ब्रेकफास्ट तयार नहुन्जेल हामी पोखरीतिरै टहलिँदै थियौँ स्थानीयहरूसँगै । महोत्सवले स्थानीयहरूमा फुलाएका आशाका पूmलहरू मुस्कुराउँदो बिहानीको मन्द हावासँग बयली खेलिरहेका थिए । कान्तिपुर टीभीका घुमघाम टोलीले तातोपानीको पोखरीलाई पृष्ठभूमिमा राखेर गर्नुपर्ने छायाङ्कन गर्दै थिए ।
ब्रेकफास्ट सकेपछि योगीजीले त्यो दिनको रुटको बारेमा सामान्य जानकारी दिए । तातोपानी (२,६०० मिटर)बाट पदयात्रा सुरु गरेर नागथली (३,३०० मिटर) पुगी थुमन (२,३०० मिटर) झर्नु चुनौतीपूर्ण यात्रा थियो ।
सहयोगीहरू मेरा सहयात्रीका झोला बोकेर बाटो तताइसकेका थिए । मैले पनि सधैँझैँ आफ्नो झोला काँधमा भिरेँ । अघिल्लो साँझ तातोपानीमा डुबाएर ताजा भएका मेरा खुट्टाहरू यात्रा उठानका लागि लालायित भइसकेका थिए । साढे नौ बज्दा मात्र तातोपानी छोड्ने स्विकृति पायौँ ।
अघिल्लो साँझ गाएको गीत हामी सबैको जिब्रोमा झुण्डिएको थियो । गीतका शब्दका उही गहिराइमा पुगेर नीमाजीले गुन्गुनाउन सुरु गरे–
‘आकाशबाट के उडी आयो, भेडाको ऊनजस्तो……..’
सबैले स्वर खाप्दै उकालो लाग्यौँ । खस्रेका हरिया वृक्षहरूको ओझेलमा पैतालाले थुमनतर्फको यात्राको रेखा कोर्दै गयो, नागबेली पदमार्गमा । उकालै भए पनि हरियालीबीच हिँड्दा असहज भएको थिएन । एकै गन्तव्यमा पुग्नका लागि सबैले एकैसाथ पाइला उठाउँदा थकाइ नै शक्तिमा बदलिएजस्तो महसुस भइरहेको थियो ।
एकै ठाउँमा बसेर काम गर्नेका लागि त हिँड्नुको मज्जा नै बेग्लै हुन्छ । जीवनको नित्यकर्मको पिँजडाबाट बाहिर निस्केर स्वतन्त्र पन्छीजस्तै उड्न पाउने मौका मानिसको जीवनमा कमै हुन्छन् । हाम्रा लागि यस्तै एउटा अवसर थियो यो पदयात्रा । अनुभूतिहरूमै अगाडि बढ्दै गयो यात्रा ।
तामाङ सम्पदा मार्गमा हामीले पार गरेका प्रत्येक बस्ती र कन्दराहरू खुला किताबका पानाजस्तै लागिरहेका थिए ।
सिकाइ र भोगाइ पनि हो पदयात्रा । मैले त्यहाँको वातावरण, मानिसको रहनसहन एवम् जीवनशैली, अनुपम सांस्कृतिक सम्पदा र जैविक विविधतालाई पनि अध्ययन गरिरहेको थिएँ । अवलोकन भ्रमणको उद्देश्य पनि यही नै थियो । वास्तवमा तामाङ सम्पदामार्गको यात्रा प्राकृतिक, सांस्कृतिक एवम् सामाजिक हिसाबले हामी सबैका लागि रोचक हँुदै थियो ।
नास्ताको नाममा तातोपानीमा एक कप कफी मात्र पिएको थिएँ । जङ्गलको बाटो नछिचोलिँदै मलाई भोक लाग्न थालिसकेको थियो । लन्चको लागि बृम्दाङ पुग्नुको विकल्प थिएन । एक घण्टाको बाटो अझै बाँकी नै थियो ।
ज्यानलाई लतार्दै बल्लबल्ल बृम्दाङ पुगियो । २,९०० मिटरको उचाइमा अवस्थित सानो गाउँ आफैँमा एउटा भ्यू प्वाइन्ट पनि रहेछ ।
पदयात्रीहरूका लागि थकाइ मार्दै प्राकृतिक दृश्यहरू अवलोकन गर्न ‘टीआरपीएपी’ले चौपारी बनाएको रहेछ । मनमनै धन्यवाद दिएँ मैले ‘टीआरपीएपी’लाई । केहीबेर त्यहीँ सुस्तायौँ हामी ।
भ्यू प्वइन्टबाट गणेश हिमाल देखियो । शरदको घमाइलो दिन । मध्याह्नको बेला पूर्वतिरबाट प्रवाहित भइरहेको हल्का न्यानो वायुको झोक्काले भ्यू प्वाइन्टमा गाडिएका ध्वजा गणेश हिमालर्फ मोडिएर ‘फर्रफर्र’ ध्वनि निकालिरहेका थिए । मेरा मनका लहरहरू पनि गणेश हिमालको चुचुरोसम्म पुग्थे, त्यही नादको तरङ्गसँगै ।
त्यहाँ बसुन्जेल श्रद्धा र एलिनासँग कान्तिपुर टोलीले ‘बाइट’ लिए ।
दीपेन्द्रले प्रश्न राखे श्रद्धासमक्ष– “कस्तो लागिरहेछ त तामाङ सम्पदामार्गभित्रको पदयात्रा ?”
उनको जवाफ थियो, “असाध्यै खुसी लागेको छ, यी सुन्दर प्राकृतिक छटाहरूमाझ आफूलाई पाउँदा । यी सुन्दर दृश्यहरू मेरो मानसपटलमा सधँै ताजा रहिरहनेछन् । यहाँका मानिसहरूको आतिथ्य सत्कारबाट अति नै प्रभावित भएकी छु ।”
उही प्रश्नको उन्मुक्त जवाफ दिइन् एलिनाले, “यी प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा र हिमाली जीवनको त्रिवेणीमा आइपुगेको छु । र, यतिखेर मैले यहाँ ‘म’ पाएकी छु । सायद स्वर्ग भनैकै यही हो कि ! खुसी व्यक्त गर्न मसँग कुनै शब्द नै छैन ।”
यत्तिकैमा उनी अव्यक्त भइन् । प्राकृतिक सौन्दर्यले मान्छेलाई यसरी अमुक बनाइदिँदो रहेछ ।
गणेश हिमालको सौन्दर्यको मातले मैले त भोक पनि बिर्सि पो सकेछु । घुमघाम कार्यक्रमका लागि उनीहरूसँग गरिएको यो छोटो कुराकानीपछि मात्र खाना खायौँ । साढे बाह बजिसकेको थियो । त्यसपछि नागथलीतर्फ लाग्यौँ हामीहरू ।
यात्राका प्रत्येक क्षणहरू अविस्मरणीय हुँदै गइरहेका थिए । तामाङ सम्पदामार्गमा पर्ने सबैभन्दा अग्लो डाँडो नै नागथली रहेछ । हामी बृम्दाङमाथिको देउराली पार गर्दै उक्लियौँ, ३,३०० मिटरको नागथलीको उचाइ चुम्न ।
नागथली आरोहण गर्दा शरीर हल्का थाकेको महसुस भए पनि मनचाहिँ थाकेको थिएन । हाम्रा पाइला नागथलीको शिरमा अवस्थित गुम्बामा पुगेर मात्र रोकिए ।
हामी सबैले बुद्धप्रति समर्पित हुँदै नमन ग¥यौँ ।
भन्छन् ‘जति नै अग्लो उचाइमा पुगे पनि तलबाट उक्लिएको सिँढी कहिल्यै नबिर्सनू ।’ नागथलीको त्यो उचाइमा पुगेर एक पटक म आफँैले हिँडेको बाटो फर्केर हेरेँ । पुड्का देखिएका थिए, वरपरका पहाडहरू ।
आहा, कति सुन्दर ! डाँडो आफैँमा सुन्दर । अनि, त्यत्तिकै सुन्दर यहाँबाट देखिने दृश्यहरू पनि !
नागथलीको आकाशमा नौटङ्की गर्दै नाचिरहेका थिए, बादलका फुल्काहरू । हावाको मादकताले शरीरमा स्फूर्ति जागेको अनुभूति भइरह्यो । उत्तरतर्फ लस्करै उभिएका लाङटाङ– २, लाङटाङ लिरुङ लगायतका तिब्बतको सिमानासम्मका हिमशैल । कुनै मूर्तिकारले निर्माण गरेको गुम्बाभित्रको पद्मासिन बुद्धको मूर्तिजस्तै लाग्थे, ती सबै । यस्तो प्रतीत हुन्थ्यो– ‘हिमालहरूले शान्तिको सन्देशलाई प्रवाहित गरिरहेका छन् ।’
नागथलीमा बसुन्जेलको गफैगफमा योगीजीले भने, “पर्यटकीय सम्भावना बोकेको ठाउँ हो यो । ‘टीआरपीएपी’ले बाटो देखाइदिएको छ । बत्तीमुनिको यो अँध्यारोमा अब पर्यटनको उज्यालो ल्याउनुपर्छ । अवलोकन भ्रमणले निजी क्षेत्रको जिम्मेवारी बढाएको छ ।”
सही थियो उनको कुरा । कुनै पनि गन्तव्यमार्गको पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । मेरो मनभित्र कल्पनाका तरङ्गहरू उर्लिरहेका थिए किनकि यो यात्राले मलाई व्यावसायिक सोचको एउटा नयाँ घुम्तीमा पु¥याइदिएको थियो ।
नागथलीभन्दा पर ३,५०० मिटरको उचाइमा ठिङ्ङ उभिएको छ– तरुक्ष डाँडो । त्यहाँसम्म पुग्न सकेको भए तिब्बतका चार गाउँहरू (ढा, न्हे, लाङ्जु र ठोङ्सा) पनि देख्न सकिन्थ्यो । हामी त्यो ठाउँसम्म पुग्न चाहन्थ्यौँ, तर त्यहाँसम्म पुग्नकै लागि मात्र पनि साढे दुई
घण्टा लाग्ने भएकाले सम्भव थिएन । हामी पुग्न नसके पनि पदयात्रा तालिकामा त्यो डाँडोलाई समावेश गर्न सकिने कुरा बताए, ‘टीआरपीएपी’का रामचन्द्र सेढाईंले ।
त्यतिखेरसम्म कान्तिपुर टीभीका क्यामराम्यान राजुले नागथलीबाट देखिएका सम्पूर्ण दृश्यहरूलाई क्यामरामा कैद गरिसकेका थिए । साथसाथै क्यामरा हुनेहरूले पनि आ–आफ्ना क्यामरामा पनि दृश्यहरू कैद गरे । उनीहरूले क्यामरामा कैद गरेका ती विम्बहरूलाई मैले भने आफ्नो नयनमा सजाएँ ।
त्यति सुन्दर नागथली छाडिहाल्ने रहर कसैको थिएन । थियो त केवल थुमन पुग्नैपर्ने बाध्यता ।
अघिल्लो दिन मोक्तेन गाउँबाट सुरु भएको उकालो बाटो नागथलीबाट ओर्लन सुरु हुँदो रहेछ । कहिले उकाली, कहिले ओराली । आखिर जिन्दगीको चक्र पनि त यही हो ! हाम्रो पदयात्राको निरन्तरता थियो, त्यो ओरालो । र, त्यो दिनको एकमात्र अन्तिम ओरालो । यतिखेर कवि तुलसी दिवसको एउटा कवितांश सम्झनामा आयो मलाई–
उक्लनेको पनि केही लाग्दो रहेनछ
ओर्लनेको पनि केही लाग्दा रहेनछ ………”
हो, यहाँसम्म आइपुग्दा हामी धेरै आरोह–अवरोह पार गरिसकेका थियौँ । अनेकौँ पटक मोडिइसकेका थियौँ । थाहा छैन, अझ कति उक्लनु र ओर्लनु अनि मोडिनुपर्ने हो यात्राभरि ! उकालो हिँड्न जति नै कठिन हुन्छ ओरालो पनि । आफ्नै शरीरको भारले खुट्टा खाँदिन्थ्यो । सुस्तरी–सुस्तरी पाइला सार्दै हामीले, धुले गोरेटोमा पदचापहरू छाड्दै । करिब डेढ घण्टाको ओरालोपछि नागथलीकै अर्को पाटोमा पुग्दा जङ्गलको भाग सकियो र भिरालो पाखामा अवस्थित एउटा सुन्दर मानव बस्ती देखियो । त्यही थियो, २,२३८ मिटरको उचाइमा अवस्थित थुमनगाउँ ।
पारिपट्टिको सबैभन्दा परको हरियो पहाडको काखमा मुस्कुराइरहेको अङ्गे्रजी वर्ण “जेड” आकारको बस्ती देखाउँदै योगीजीले भने, “त्यही हो बृदिम, भोलिको गन्तव्य । धेरै टाढा छैन । भोटेकोशीको पुल तरेर उकालो लागेपछि लिङलिङ भन्ने ठाउँमा पुगिन्छ । हाम्रो लन्च त्यहीँ हुनेछ । त्यहाँबाट लगभग दुई घण्टा लाग्ला ।”
थुमन गाउँभन्दा तल बगिरहेको देखियो लाङटाङ खोला । खोलापारि देखिन्थे लिङलिङ र पेल्को लगायतका सुन्दर बस्तीहरू । बृदिमभन्दा धेरै माथि उभिएको देखिन्थ्यो, ६,५९६ मिटरको लाङटाङ– २ । दृश्य हेर्दै हामीले केही क्षण शरीरलाई आराम दियौँ । हामीले फेरि पुरानै लयमा पाइला चाल्यौँ । पाँच बजे थुमनको मिनग्युर साम्लिङ गुम्बा पुगेपछि यात्रा टुङ्गियो ।
गुम्बा अगाडि लामबद्ध भएर प्रतीक्षारत थिए थुमनबासी, हाम्रो स्वागतार्थ । स्वागत र बिदाइ त हाम्रो यात्राका अविस्मरणीय क्षणहरू हुने नै भए । एक ठाउँमा हाम्रो बिदाइ हुन्थ्यो त अर्को ठाउँमा स्वागत, उही लयमा ।
थुमनमा होमस्टेमा बस्ने व्यवस्था गरिएको रहेछ । आज पनि सहयात्रीहरूको घुराइको शिकार हुनुपर्ने हो कि भन्ने चिन्ताको खग्रास थियो मभित्र ।
सेढाईंजीले होम–स्टेसम्म पु¥याइदिए हामीलाई । पदयात्रा सुरु गरेदेखि नै मैले राम्ररी निदाउन पाएको थिइनँ । एसटीएन, एनटीबी, एसएनभी, निजी क्षेत्रका र बाँकीलाई छुट्टाछुट्टै घरमा व्यवस्था गरिएको रहेछ । नम्रता, एलिना, श्रद्धा, आस्था, निर्मला, राजीव, नीमा
छेवाङ, विजय, योगी, म र जेरोन एउटै होमस्टेमा थियौँ । म मनमनै खुसी थिएँ, घुर्ने मित्रहरू नपरेकाले ।
पश्चिमतिर सर्दै गरेको घामलाई पहाडले छेक्दै थियो । अस्ताचलमा गोधूलीका पत्रहरू धमाधम खात लाग्दै थिए । घरमा झोला राखेर केही समय गाउँ घुम्न निस्क्यौ हामी । प्रायः घरहरू गत्लाङकै जस्तै । थुमनका एकजना भलाद्मीले इतिहास बताए मलाई । ‘तिब्बतबाट आएर पुर्खाहरूले यहाँ पहिलो बस्ती बसाएका थिए । उनीहरू आएका बेला यहाँ विभिन्न खालका जडीबुटीहरू झुलिरहेका देखेछन् । तिब्बती भाषामा ‘थोङ’ भनेको ‘देखिनु’ र ‘म्युन’ भनेको ‘एकदमै राम्रो’ हो । यही देखेर नै यहाँ बस्ती बसाइएको र त्यस ठाउँलाई थोङम्युन भन्दाभन्दै अपभ्रंश भएर थुमन भनिन थालिएको रे । तिब्बतबाट आएका दुई भाइमध्ये एक भाइ यहीँ बसेका र एक भाइ स्याब्रु गएका थिए रे । जतिखेर उनीहरू त्यहाँ आएका थिए, त्यतिबेला राक्षसहरूको बिगबिगी थियो रे । राक्षसहरूलाई गुफामा बसेका तिनै लामा भाइहरूले नियन्त्रणमा लिएका थिए रे ।’
उनलाई सोधेँ, “यहाँबाट टिमुरे हँुदै ऐतिहासिक रसुवागढी पुग्न कति समय लाग्छ ?”
“चार घण्टामात्र ।” उनको जवाफ थियो ।
मैले योगीजीसँग प्रश्न राखेँ, “हामी रसुवागढी पनि जान्छौँ त ?”
अघिल्लो पटक त लगेका थियौँ । तर यसपालिलाई सकिएन ।” उनले बताए । थुमनमा साँझ खस्नु अगावै हामी होमस्टे फर्किसकेका थियौँ ।
त्यो सानो घरभित्र बलिरहेको पिलपिल बत्तीको उज्यालोमा घरबेटी दिदी हाम्रा लागि खाना बनाउने तर्खर गर्दै थिइन् । बाहिर चिसो बढ्दै थियो । हामी पुग्ने बित्तिकै चुलो सल्काइन् उनले ।
पाहुना बनेर बस्न पाउँदाको अनुभूति बेग्लै हुँदोरहेछ । त्यो दिनको होमस्टेको अनुभव नौलो थियो, हाम्रा लागि । माटाले बनाएको चुलामा दाउरा झोस्दै हामी त्यो साँघुरो भान्छाकोठाको चुलो घेरेर बस्यौँ, अटेसमटेस गरेर । र, आपसमा ठट्टा गर्दै ।
घरबेटी दिदीले हाम्रा लागि मकै र भटमास भुटिन् । आलु उसिनिन् । टिमुरको छोप हालेको अचार बनाइन् र दालभात पकाइन् । सत्कारमा कोदोको झोल पनि थियो । पदयात्रा सुरु गरेदेखि नै यो टुटेको थिएन । अगेनाको छेउमा बसेर शिथिल देहलाई कोदोको तीनपानेले आँत भिजाउनुको मजा नै भिन्दै । खानापछि पनि निकैबेरसम्म हामीले अँगेनाको डिल छाडेनौँ । एक प्रहर रात बितिसकेछ ।
अगेनाबाट बाहिर निस्केर शान्त थुमनलाई एकछिन हेरेँ । सामुन्नेको हिमालको उचाइ छिचोलेर थुमनमाथि आइपुगिसकेको थियो चाँदनी । सुनसान प्रकृति हेरेँ । थुमनलाई नियालेँ । समस्त प्रकृति नै चन्द्रमाको त्यो स्निग्ध, शीत्तल छहारीमा सुस्ताइरहेको थियो । लाग्थ्यो– प्रकृतिसँगै मस्त निदाइरहेको थुमनले निकट भविष्यमै पर्यटकीय गन्तव्य हुने सपना देखिरहेछ ।
(यही साउन २४ गते शुक्रबार, प्रज्ञा भवन कमलादीमा लोकार्पण गरिएको नियात्राकार राजेन्द्रमान डङ्गोलको नियात्रा “यात्राका पाइला”को “दिग्भ्रमित पलहरू” शीर्षकबाट ।)
Prevसिंहदरवार प्रहरी वृत्तबाटै कैदी फरार
रकेट परीक्षण गर्दा दुर्घटना भएपछि ५ वैज्ञानिकको मृत्युNext